Topnepalnews.com | सुपरसिक्स सपना । नेपाल जिम्वाबेविरुद्ध भिड्दै ( लाईभ ! )
सुपरसिक्स सपना । नेपाल जिम्वाबेविरुद्ध भिड्दै ( लाईभ ! )
Posted on: March 03, 2018 | views: 14497
विश्व क्रिकेट क्वालिफायर प्रतियोगिताको सुपर सिक्स सपना बुन्दै जिम्माबे पुगेको नेपाली टोलि आइतबार आयोजक देश बिरुद्ध उसकै घरेलु मैदानमा भिड्दैछ ।
नेपाली समय अनुसार अपरान्ह सवा १ बजेबाट सुरु हुने खेलको यसै पेजमा लाईभ हेर्न सक्नुहुनेछ । तुलनात्मक रुपमा नेपालभन्दा बलियो ठानिएको जिम्बावे पछिल्लो समय लयमा रहेको नेपाली टोली र उदियमान नेपाली खेलाडी देखेपछि झस्किएको बताइन्छ ।
नेपालले पहिलो खेल भोलि टेस्ट मान्यताप्राप्त तथा लगातार पछिल्ला ९ विश्वकपमा सहभागीता जनाएको जिम्बाब्वेविरुद्ध उसकै भूमिमा खेल्दैछ ।
कुनै पनि टेस्ट राष्ट्रविरुद्ध नेपाली राष्ट्रिय टिमको भिडन्त यो दोस्रो हो । यसअघि टी २० विश्वकपमा नेपालले बंगलादेशविरुद्ध खेलेको थियो ।
भोलिको खेलले नेपालको दिशा निर्धारण गर्न सक्छ । जिम्बाबेलाई स्तब्ध तुल्याउन सके नेपालसँग अरु राष्ट्रहरु तर्सिनेछन् । नतिजा जिम्बाब्वेको पक्षमा गए नेपालको यात्रा कठिन हुने चिरञ्जीवी पौडेलले अनलाइनखवरमा समाचार लेखेका छन् ।
नेपाली टिमको उच्च मनोबल
डिभिजन-२ का खेलहरुमा नेपालले अत्यन्त कठिन परिस्थितिबाट जित निकाल्न सफल भएको थियो । त्यसले नेपाली खेलाडीमा बलियो आत्मविश्वास जगाएको छ ।
फाइनलमा नेपाल यूएईसँग पराजित भयो । तर, त्यसमा पनि नेपालले सजिलै हार मानेको थिएन । यूएईले दिएको कठिन लक्ष्यमा नेपाल ७ रन मात्रले चुकेको थियो ।
त्यही यूएईलाई तीन दिन अगाडिको अभ्यास खेलमा नेपालले मिठो जवाफ फर्कायो । २९ ओभरमा घटाइएको खेलमा नेपालले ५ विकेट र चार बल बाँकी रहँदा लक्ष्य पुरा गरेको थियो । नेपालले दोस्रो अभ्यास म्याच पनि खेल्न पाएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो तर, हङकङविरुद्धको म्याच ‘वासआउट’ भयो ।
नजर नेपालको ब्याटिङमा
नेपाली ब्याटिङमा सिनियर र जुनियर ब्याट्सम्यानहरुको गजब संयोजन छ । त्यसो त प्रतियोगितामा सबैभन्दा भविश्यवाणी गर्न नसकिने ब्याटिङ लाइनअप नेपालकै देखिन्छ ।
टिममा पारस खड्का, शरद भेषावकर र ज्ञानेन्द्र मल्लको खेलाडीहरुको त्रिशक्ति छ । उनीहरुमध्ये भरलाग्दा ओपनिङ ब्याट्सम्यान ज्ञानेन्द्र मल्लको पछिल्लो खराब र्फम नेपालका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ ।
नेपाली ब्याटिङका एक खम्बा मानिएका उनले राम्रो सुरुवात दिलाउन नसके नेपाली टिम चाँडै दवावमा पर्नेछ । त्यसैले उनी र्फममा फर्किनु नेपालका लागि अति महत्वपूर्ण हुन्छ ।
अर्कोतर्फ कप्तान पारस खड्का लयमा छन् । उनी डिभिजन २ प्रतियोगिताभरी सबैभन्दा बढि रन बटुल्ने र सबैभन्दा बढि छक्का हान्ने ब्याट्सम्यान थिए । फाइनलमा यूएईविरुद्ध उनले उत्कृष्ट शतक हानेका थिए, तर त्यो नेपाललाई जिताउन पर्याप्त भएन ।
अर्का अनुभवी ब्याट्सम्यान शरद भेषवाकर पछिल्लो केही समययता स्थिर प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । मध्यक्रममा उनी वरिपरी युवा खेलाडीहरु छन् । त्यसैले उनले सम्हालिएर ब्याटिङ गर्दै युवा ब्याट्सम्यानहरुलाई आफ्नो सट खेल्न चान्स दिनुपर्नेछ ।
दिपेन्द्र सिंह ऐरी, आरिफ सेख, रोहितकुमार पौडेल, दिलिप नाथ जस्ता युवा खेलाडीहरु छन् । उनीहरुमध्ये दिपेन्द्र सिंह ऐरीबाट नेपालले ठूलो आशा लिएको छ । डिभिजन २ प्रतियोगितामा उनी खासै लयमा देखिएनन् । तर, यूएईविरुद्धको अभ्यास म्याचमा ४१ रन हानेर उनले आफ्नो र्फम फर्काउन खोजेका छन् ।
तल्लो मध्यक्रममा ब्याटिङ गर्ने आरिफ र रोहित पौडेलले डिभिजन २ प्रतियोगितामा नेपाललाई ठूलो शक्ति प्रदान गरेका थिए । नेपाल उनीहरुको यही र्फमको निरन्तरता चाहन्छ । १५ वषिर्य रोहितले गजबको परिपक्वता देखाएका छन् र उनलाई भविष्यका ब्याटिङ स्टारका रुपमा हेर्न थालिएको छ ।
नेपाली टिम सम्भावित ओपनिङ ब्याट्सम्यान दिलिप नाथले आक्कलझुक्कल आफ्नो क्षमता देखाए पनि आफूलाई प्रमाणित गर्न अझै सकेका छैनन् । तर विकेटकिपर पनि भएको हिसाबले नेपालसामु उनीबाट ओपनिङ गराउनुको विकल्प छैन ।
चिन्ता फास्ट बलिङको
नेपाली टिमको सबैभन्दा कमजोर कडी यतिबेला देखिएको छ फास्ट बलिङ । डिभिजन २ मा सोमपाल कामी र करण केसीलाई नेपालले स्ट्राइकिङ फास्ट बलरका रुपमा उतारेको थियो ।
तर, उनीहरुमध्ये करण केसीको बलिङ पुरै फ्लप रह्यो । उनले न विकेट लिन सके, न रन रोक्न । बरु ब्याटिङको बलमा उनले क्यानाविरुद्धको निर्णायक म्याच जिताए । तर, ब्याटिङको प्लस प्वाइन्टले गर्दा मात्रै नेपालले उनलाई टिममा राख्छ कि ललित भण्डारीको बारेमा सोच्छ, हेर्न भोली नै थाहा हुनेछ ।
अर्का फास्ट बलर सोमपाल कामीमा विकेट लिने क्षमता भए पनि उनको प्रदर्शनमा एकरुपता देखिएको छैन । कतिपय अवस्थामा उनी निकै खर्चिला सावित हुन सक्छन् र नेपाललाई चाहिएको बेला उनीबाट विकेट ननिस्कन सक्छ ।
नेपालका तेस्रो फास्ट बलरको रुपमा कप्तान पारस खड्काले खेल्ने छन् । तर ब्याटिङमा जस्तो बलिङमा उनको भर गर्न सकिँदैन । यद्यपि उनी प्राय किफायति रहन्छन् ।
यो प्रतियोगितामा नेपालले सोचेजस्तो नतिजा निकाल्नका लागि नेपालको सबैभन्दा ठुलो हतियार भनेको स्पिन बलिङ नै हो । त्यसो त जिम्वाबेको पिच सामान्यतया फास्ट बलिङ फ्रेन्ड्ली हुन्छ । तर, आईसीसीका अनुसार यो प्रतियोगितामा ‘स्पिन’ ठूलो फ्याक्टर हुन सक्छ ।
नेपालका बसन्त रेग्मी र सन्दिप लामिछाने प्रतियोगिताकै सम्भावित उत्कृष्ट स्पिन जोडी हुन् । सन्दिपको विषयमा धेरै भन्नै पर्दैन, जसले पछिल्लो समय आइपीएल र क्यारेबियन लीगमा समेत स्थान बनाएर विश्व क्रिकेटको ध्यानआकृष्ट गरेका छन् । अर्कोतर्फ बसन्त अनुभव र क्षमताका खानी हुन् । जस्तोसुकै पिचमा पनि यी दुईविरुद्ध विपक्षी ब्याट्सम्यानहरुले खुलेर खेल्न कठिन हुनेछ ।
नेपालसँग अनुभवि स्पिनर शक्ति गौचन पनि छन् । तर उनले डिभिजन २ प्रतियोगितामा एउटा म्याच पनि पाएनन् । यस प्रतियोगितामा पीचको अवस्था हेरेर तीन जना स्पिनर खेलाइए उनले मौका पाउन सक्छन्, अन्यथा बेन्चमै बसेर रमाउनुपर्नेछ । चौंथो स्पिनरका रुपमा लिइएका ललित राजभण्डारीले मौका पाउन झन् कठिन छ ।
जिम्बाब्वे कति बलियो ?
जिम्बाबेको कुरा गर्दा विश्व क्रिकेटको एउटा शक्ति राष्ट्र नै थियो, जसले पछिल्लो समय आफ्नो पुरानो साख बचाउन सकेको छैन । एक दिवसीय मान्यता प्राप्त १२ राष्ट्रहरुको सूचीमा अहिले यो ११ स्थानमा छ । जिम्बाबेभन्दा पछाडि आयरल्यान्ड मात्र छ ।
हालै मात्र यूएईमा अफगानिस्तानविरुद्ध खेलेको ५ म्याचको श्रृंखला जिम्बाव्वेले १(४ ले सुम्पेको थियो । शारजहाँमा भएको अन्तिम खेलमा जिम्बाबे ३३ ओभरभित्र ९५ रनमा अलआउट भएको थियो ।
जिम्बाब्वेको ब्याटिङका प्रमुख हतियार मध्यक्रमका विकेटकिपर ब्याट्सम्यान ब्रेन्डन टेलर हुन् । उनी वर्ल्ड क्लास ब्याट्सम्यान मानिन्छन् । उनले विश्वका शक्तिशाली टिमहरुविरुद्ध पनि उत्कृष्ट ब्याटिङ प्रदर्शन गरेका छन् ।
टेलर केही समय टिमबाट बाहिर थिए तर, पुनरागमनपछि उनले राम्रो लय समातेको देखिन्छ । गत जनवरीमा उनले श्रीलंकाविरुद्ध अर्द्धशतक हानेका थिए भने अफगानिस्तानविरुद्ध १२५ रन हान्दै शारजाहमा जिम्बाबेलाई सिरिजको एक मात्र म्याच जिताएका थिए । उनले अहिलेसम्म ९ सतक हानिसकेका छन् ।
तीन वटा विश्वकप खेलेका उनले २०१५ को विश्वकपमा क्रमशः ४०, ४७, ३७, ५०, १२१ र १३८ रन ठोकेका थिए । उनको १३८ रन भारतविरुद्ध थियो ।
भोलिको खेलमा टेलरलाई रोक्नु नेपालका लागि प्रमुख चुनौति हो । उनीविरुद्ध नेपालको स्पिन बलिङ हेर्न लायक विषय हुनेछ ।
तर, यसको अर्थ अरु ब्याट्सम्यानहरु काबिल छैनन् भन्ने होइन । नेपाल सतर्क हुनुपर्ने अन्य ब्याट्सम्यानहरुमा ओपनर हेमिल्टन मासाकाद्जा र अलराउन्डर सिकन्दर राजा हुन् । मासाकाद्जाले ओडीआईमा पाँच शतक र ३२ अर्द्धशतक हानेका छन् । पपुवा न्यूगिनीविरुद्ध अभ्यास म्याचमा उनले अर्द्धशतक हानेका थिए । यसैगरी पाकिस्तानी मुलका ब्याटिङ अलराउन्डर सिकन्दर राजाले ३ शतक र ११ अर्द्धशतक हानेका छन् ।
बलिङको कुरा गर्दा २७ वर्षीय तेन्दाई चतारा जिम्बाबेका प्रमुख बलर मानिन्छन । उनले अहिलेसम्म ५० ओडीआई खेलेर ६८ विकेट लिएका छन् । अर्का घातक बलर हुन् कप्तान ग्रेम क्रिमर । ३१ वर्षीय क्रिमर लेगब्रेक फाल्छन् । उनले अहिलेसम्म ९० ओडीआई खेलेर एक सय ९ विकेट लिएका छन् ।
आईसीसीले म्याच प्रिभ्यूमा लेखेको छ, ‘भोलिको म्याचमा जिम्बाबे ‘फेभरेट’ हो । तर, नेपालले सरप्राइज रिजल्ट निकाल्न सक्छ ।’
यथार्थ पनि यही हो ।